I-Pet Archive - iSearch
Qala ikhemisi ukuphulula
Amakati, izinja, onogwaja, izingulube ze-Guinea kanye ne-hamsters: zonke zibalwa phakathi kwezilwane ezithandwa kakhulu zesilwane zomuntu. Emhlabeni we-30 izigidi zezilwane ezifuywayo zihlala emakhaya aseJalimane - yiRussia kuphela enezilwane ezifuywayo eYurophu. Ngokuvamile, isibopho sesilwane sinamandla kakhulu kangangokuthi kubhekwa njengelungu lomndeni noma njengengane. Imboni isiye yazivumelanisa nalokhu futhi inikeza izithandani zethu ezithandekayo manje imikhiqizo, esondela emazingeni aphezulu angaphezu kwezinga lomuntu.
isearch - Okthoba 9, 2017
isearch - Julayi 29, 2017
ukuphulula isearch - Julayi 27, 2017 0
Umgogodla we-rabbit ungathengwa ukuzalanisa, kodwa nakubathandi bezilwane. Ngakho-ke izidingo zomgogodla we-rabbit ziyahlukahluka. Kodwa kuqala ...
ukuphulula isearch - Julayi 21, 2017 0
Umbhede wenja - ukhululekile, umuntu ngamunye futhi shapely Inja ichitha isikhathi sayo esiningi ilele. Ukuze indawo ayithandayo hhayi usofa noma umbhede we ...
ukuphulula isearch - Julayi 19, 2017 0
Ukunakekelwa koboya bekati kuvikela impilo yekati Ukuzilolonga kuyingxenye yokuqala yokunakekelwa kwekati. Ukugcina isikhumba nezinwele ziphilile, wonke ...
ukuphulula isearch - Julayi 8, 2017 0
Ukukhethwa kwendawo yokuhlala efanele kunethonya elikhulu emkhakheni wokuphila kanye nokuphila kwesikhathi se-hamster. Ubukhulu obuncane be-hamster buzenza sengathi ...
ukuphulula isearch - Juni 19, 2017 0
Ukugcina ikati kuyisici esibalulekile, uma kungeyona ebaluleke kunazo zonke, ukudla okulungile. Kuzohwebo kunezinhlobo eziningi ezihlukahlukene zokudla kwesikati ....
ukuphulula isearch - Juni 15, 2017 0
Ukubopha inja ukubolekana okunomusa Ezindaweni eziningi kukhona ukuvuza kwezinja. Kepha nakumngani wakhe onemilenze emine ngokuphepha ngokusebenzisa ithrafikhi eqhubeka idida ...
Ukuthola ukujaha okuyinja kwenja - yilokho konke mayelana nokuhlela ukuletha ingane kuwe, ngakho-ke cabanga nje ukuthi iyiphi inja ejaha ...
Thola udoti ofanele wamakati Ngubani onekati okwaziyo ukuthi ikati ibeka engakanani enhlanzweni enhle. Ukufuna ...
ukuphulula isearch - Juni 5, 2017 0
Izibalo zithi emakhaya aseJalimane cishe amakati angu-13,4 million ahlala. Kodwa hhayi kuphela abanikazi bekati abazoba inkululeko nenkululeko ye ...
Ikakhulukazi kubanikazi bamafulethi, isihlahla sokuqhayisa eduze kwezimbizo zokudla kanye nebhokisi lensimbi kungokwezixhobo eziyisisekelo. Kokubili ukugqoka okuvamile kwezigqoko kanye nokuphumula ...